बलात्कार मुद्दामा नेमारलाई सफाइ - सबै खेल
बलात्कार मुद्दामा नेमारलाई सफाइ
१४ श्रावण २०७६, मंगलवार १८:१० July 30, 20190Comments neymar
ब्राजिलियन स्टार नेमारमाथि लागेको बलात्कार मुद्धाबाट छुटकारा पाएका छन् । नेमारमाथि बलात्कार आरोपमा मुद्दा दायर गरेकी नजिला त्रिनान्देले पार्याप्त प्रमाण जुनाउटन नसकेपछि नेमारविरुद्धको मुद्दाको फाइलन बन्द भएको छ ।
ब्राजिल साओ पाओलोमा एक ब्राजिलियन मोडलले नेमारले बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । तर, उनी प्रहरीसमक्ष प्रमाण पेश गर्न असमर्थ भइन् । यता, नेमारले भने आफूमाथि बलात्कार मुद्धा फासाउने प्रयास गरिएको बताउँदै आएका थिए ।
भर्खरै चोटबाट मुक्त भएका नेमार यतिखेर एक्लै प्रशिक्षण गरिरहेका छन् । पिएसजी छाड्दै पुनः बार्सिलोना जान चाहिरहेका नेमारलाई पिएसजीले प्रिसिजन टुरमा सामेल गरेको छैन ।
त्रिनान्देले दर्ता गरेको उजुरीमा अनुसार नेमार र ती महिला इन्स्टाग्राममार्फत भेटेका थिए । ब्राजिलकी ती महिलालाई नेमारले पेरिस आउन भनेका थिए । विमानको टिकट काटिदिएका थिए ।फ्रान्सको होटल सोफिटेल पेरिस आर्क डु ट्रोम्फीमा उनीहरु यसै वर्षको १५ मेमा बसेका थिए । त्यसैबेला मदिराले मात्तिएका नेमारले उनलाई बलात्कार गरेको उजुरीमा उल्लेख थियो ।
बलात्कारको आरोपछि नेमारले इन्स्टाग्राम भिडियो मार्फत् ती महिला पठाएका म्यासेजहरु सार्वजनिक गरेका थिए। जहाँ अश्लिल तस्बिरहरु समेत समावेश थिए । उक्त म्यासेजमा महिला आफैंले नेमारसँग सम्बन्ध बढाउने खोजेको देखिन्छ ।
← रोनाल्डो रियल फर्कन सक्ने !
यू–१५ साफ च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपाल र भारत भिड्ने →
यु–१५ महिला साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली घोषणा
६ श्रावण २०७५, आईतवार २०:०६ 0
सर्‍यो यू–१७ र यू–२० महिला विश्वकप
२२ चैत्र २०७६, शनिबार १७:१६ 0
एल क्लासिको बार्साको मैदानबाट रियलको मैदानमा सारिँदै, के हो कारण ?
२९ आश्विन २०७६, बुधबार २१:४२ 0